Taliyaha Ciidamada xoogga dalka oo la kulmay Saraakiil lagu soo tababaray dalka Turkiga – STAR FM SOMALIA
Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed S/Gaas Maxamed Aaden Axmed ayaa la kulmay Saraakiil iyo saraakiil xigeen ka tirsan ciidanka xoogga dalka, kuwaasoo dalka dib ugu soo laabtay, kadib tababar ay ku soo qaateen dalka Turkiga.
Taliyaha ayaa kula dar-daarmay saraakiisha tababarka dhamaysatay aqoontii la soo baray in ay uga faa’iideeyaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed, waxaana uu tilmaamay muhiimada ay qaranka u leedahay tababarkooda iyo ku soo biirista Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyed.
“Maanta laga bilaabo hal qabiil ayaad tihiin kaas oo ah Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaa la idin soo barey tababar heerkiisu sareeyo, ujeedkuna waa in aad dalkiina anfacdaan kuwa aan tababarkaas fursad u helina bartaan wixii la idin soo barey” .
“Waxaa idin saaran mas’uuliyad aad u culus oo qaran, waxaana la idinka sugayaa inaad soo celisaan sharaftii iyo magacii ciidanka xoogga”. Ayuu yiri Gen Maxamed Aaden.
Wajiyada Saraakiisha ayaa laga dheehan karay farxad iyo rey reyn, maadama ay fursad u heleen in dalka dibadiisa ay wax ku soo bartaan, iyagoo muujiyey inay kalsooni buuxda ku qabaan dawladda iyo shacabkooda.